SP-L09 SOICARE 300ml hadhuudh 7 Led Lights saliid udgoon saliid lagama maarmaanka faafiye ah, Shiinaha SP-L09 SOICARE 300ml hadhuudh 7 Led Lights saliid udgoon saliid udgoon ultrasonic faafiyeyaasha, Shirkadaha, Warshad - Sunpai Industries Limited
SOICARE 300ml hadhuudh 7 Led Lights Laydh saliid udgoon baahsan ultrasonic faafiye
· Xiritaanka-Biyo La'aanta Biyo-la'aanta ah iyo BPA Bilaashka ah - Iyadoo ay la socoto shaqeysiinta otomaatiga ee bilaa biyo ah, huur-bixiyehan ayaa si otomaatig ah u demin doona marka biyuhu ka dhammaadaan. Tani waxay ku badbaadin kartaa adiga oo ilaalin kara aaladda lafteeda sidoo kale. Daaweeyaha udugga waxaa laga sameeyay maaddooyin aan BPA lahayn, oo 100% aan sun ahayn oo deegaanka u habboon.
· Teknolojiyada Xiinka ---- Faafiyaha udgoonku wuxuu adeegsadaa hirarka ultrasonic si uu isla markiiba uumiyo biyaha iyo saliida lagama maarmaanka ah ee haanta, si uu u soo saaro ceeryaamo udgoon udgoon, una ogolaado carafku inuu dul sabeeyo hawada, uumiyo hawada. Qolkaaga waxaa ka buuxi doona udgoon, kaas oo kuu xaqiijin kara hurdo fiican. Ku habboon qolka jiifka, qolka daraasadda, xafiiska, qolka fadhiga, yoga, HBS, qolka ilmaha, iwm.
· 7 Beddelida Midabada Nalalka Iftiinka ---- Iftiinka LED-ka waxaa loo dejin karaa 7 midab oo dejinaya. Waad ku wareejin kartaa illaa 7 midab, ama waxaad u dejin kartaa midab midab leh. Midab badalka, waxay abuuri kartaa jawi jaceyl.
· Hadiyad Kaamil ah - Faafiyaha udgoonku wuxuu adeegsadaa naqshadaynta qashinka alwaax, sida gabal qurxin ah Waa ikhtiyaar wanaagsan in tan loogu isticmaalo hadiyado asxaabtaada iyo qoysaskaada, kuwa ku caashaqay.
woodgrain udugga ultrasonic baahinta saliid lagama maarmaan
30-40ml / saac
SP-G48 150ml tartan xayeysiin ultrasonic muhiim ah saliidaha udgoonka caraf udgoon